Qaab-dhismeedka Shiinaha ee Shabakadda Shiinaha, Warshad Heer Qaab-dhismeedka Jinsiga ah iyo soosaarayaasha | Zhenyuan
Unugyada aasaasiga ah ee shaashadda shaxda waa koongaro saddex geesood ah, jidh saddexagal leh, cube, afargeesle la jaray iyo wixii la mid ah. Waxyaabahan aasaasiga ah waa la isku dari karaa si loo sameeyo saddex geesood, afar geesle, laba geesleyaal ah, wareeg ah, ama qaab kasta oo qaab qorshe ah. Faa'iidooyinka xoogga booska, culeyska fudud, qallafsanaan ballaaran, waxqabadka dhul gariirka wanaagsan, iwm .Waxaa loo isticmaali karaa saqafka jimicsiga, tiyaatarka, hoolka bandhigga, hoolka sugitaanka, shiraac istaagga garoonka, hangar diyaaradeed, qaab laba-dhinac qaabdhismeed ballaadhan iyo aqoon isweydaarsi iyo dhismayaal kale.
Fasalka koowaad wuxuu ka kooban yahay nidaamka goos gooska diyaaradda, oo ay ku jiraan afar foom, oo kala ah, laba jiho oo toos loo dhigayo shaashadda toosan, laba jiho oo loo jiheeyo shaashad laba-geesood leh iyo laba jiho oo salka ku haya seddex jiho.
Nooca labaad wuxuu ka kooban yahay unugyo afar geesood ah oo Ahraam ah. Waxa jira shan qaab: saddexda geesood ee togan, shabaqa afar geesoodka ah ee saxda ah, shabakadda laba geesoodka ah ee laba jibbaaran, shaashadda afar geesoodlaha jeexjeexa iyo shabakadda afar geesoodka ah.
Nooca saddexaad wuxuu ka kooban yahay cutubyo saddex geesood ah oo Ahraam ah. Waxaa jira seddex nooc oo ah shabaqeyaasha pyramidal saddex geesoodka ah, shabagyadoodii kala soocista ahaa ee loo yaqaan 'tricone netnet' iyo malabyada loo yaqaan 'tricone netnet'. , waxaa jira shabakad bir ah, shaashad la taaban karo oo la xoojiyey iyo bir iyo shabag la xoojiyey oo isku xiran, oo shabaqa birta loo adeegsado in ka badan.
Falanqaynta xoogga gudaha ee shabakadda:
Qaabdhismeedka shabakadu waa amar sare oo qaab dhismeed ahaan aan la garan karin. Falanqaynta noocyada saxanka nooca, waxaa guud ahaan loo qaatay in kala-goysyada ay ku xiran yihiin, oo culeyska dibedda ayaa lagu dhaqmayaa kala-goysyada iyadoo loo eegayo mabda'a u dhiganta ee taagan, kaas oo noqon kara waxaa loo xisaabiyaa iyadoo la raacayo habka barokaca booska, taas oo ah habka cunsuriga loo yaqaan ee nidaamka usha lagu xiro Hababka xisaabinta ee fudud, sida habka falanqaynta farqiga u dhexeeya iskutallaabta iyo saxanka - sida habka, ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa in lagu xisaabiyo xoogagga gudaha iyo barakaca. ka kooban hal lakab qolof guud ahaan waxaa loo maleynayaa inuu yahay mid adag oo isku dhafan, kaas oo loo xisaabin karo iyadoo loo eegayo habka ugu yar ee habka isku dhafan ee isku dhafka ah. Rugta shabaqa ee laba jibbaaran waxaa lagu xisaabin karaa habka cunugga yar ee nidaamka usha lagu xidho. Habka-shell ayaa sidoo kale loo isticmaali karaa si loo fududeeyo xisaabinta hal-lakab iyo qaab-dhismeedka shabag qolof laba-lakab ah.
Qaab dhismeedka naqshadeynta shabakadda:
Qeybta iskutallaabta ee qaabdhismeedka 'truss structure' waa in lagu go'aamiyaa iyadoo la tixraacayo xisaabinta xoogga iyo xasilloonida Si loo yareeyo dhererka la xisaabiyey ee baarka cadaadiska loona kordhiyo xasilloonidiisa, tallaabooyinka sida ku darista baararka dib loo riixayo iyo taageerada taageerada ayaa la qaadan karaa. oo ah shandada nooca-saxanka ah iyo Roobka laba-qolofka ah ee birta laga sameeyo inta badan waxaa ka mid ah saddex nooc: iskutallaabta saxanka iskutallaabta, isku-xidhka kubbadda godan ee godka leh iyo isku-xidhka kubbadda isku-xidhka. Isku-xidhka saxanka iskutallaabtu wuxuu ku habboon yahay qaab-dhismeedka googo'da birta birta ah , iyo usha iyo saxanka wadajirka ah waxay kuxiranyihiin alxanka ama isku-xidhka xoogga sare.Hab isku xidhka kubbadaha iyo iskudhafka kubbada waxay ku haboon yihiin qaab dhismeedka tubbada birta. Isku-xidhka qaabdhismeedka shaashadda hal-lakabka waa inuu awood u yeesho inuu adkeysto foorarsiga xoog gudaha ah. Guud ahaan, isticmaalka birta ee kala-goysyada ayaa qiyaastii ah 15 ~ 20% birta loo adeegsaday dhismaha oo dhan qaab dhismeedka shabakadda ....
Qorshaha dhulka ee qaabka mesh
Qorshaha dhulka ee shabakada
Sawirka Naqshadeynta Grid
Qorshaynta hoose ee shabaqa shabaqa
3D node naqshadeynta naqshadeynta shabakadda
Hore: Dhismaha qorshaha biyaha iyo korontada
Xiga: Fasalka qaab dhismeedka xuubka
Naqshadeynta Qaabka Xariirka
Naqshadeynta Meelaha Meel bannaan
Naqshadeynta Qaabka Birta
Naqshadeynta Guriga Birta ah